43 Ɔkɔm no mu yɛɛ den wɔ asase no so.+ 2 Afei bere a aduan a wɔde fi Egypt bae no sae no,+ wɔn papa ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monsan nkɔtɔ aduan kakra mmra.”+ 3 Ɛnna Yuda ka kyerɛɛ no sɛ:+ “Ɔbarima no kae denneennen kyerɛɛ yɛn sɛ, ‘Sɛ moamfa mo nua no amma a, munnsi m’anim.’+ 4 Sɛ wobɛma yɛn nua no aka yɛn ho akɔ a,+ ɛnde yɛbɛkɔ akɔtɔ aduan abrɛ wo. 5 Na sɛ woamma wankɔ a, ɛnde yɛrensi hɔ, efisɛ ɔbarima no ka kyerɛɛ yɛn sɛ, ‘Munnsi m’anim gye sɛ mo nua no ka mo ho.’”+ 6 Na Israel teɛɛm sɛ:+ “Dɛn nti na moayɛ me bɔne a ɛte sɛɛ? Ɛyɛɛ dɛn na moka kyerɛɛ ɔbarima no sɛ mo nua bi wɔ hɔ?” 7 Wobuae sɛ: “Ɔbarima no ara na obisaa yɛne yɛn abusuafo ho nsɛm sɛ, ‘Mo papa te ase?+ Mowɔ nua foforo bi?’ Na yɛn nso yɛmaa no ɛho mmuae.+ Yɛbɛyɛ dɛn atumi ahu sɛ ɔbɛka sɛ, ‘Momfa mo nua no mmra’?”+ 8 Afei Yuda ka kyerɛɛ ne papa Israel sɛ: “Fa abofra no ma me na yɛnkɔ,+ na yɛne wo ne yɛn mma nkumaa no+ atena ase na yɛanwuwu.+ 9 Mede me ho bedi agyinam.+ Sɛ biribi to no a, bisa no me nsam.+ Sɛ mamfa no ammrɛ wo a, medi w’anim fɔ daa. 10 Sɛ yɛkɔe a, anka saa bere yi yɛakɔ aba mprenu.”+ 11 Ɛnna wɔn papa Israel ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Sɛ saa na ɛte a,+ ɛnde nea monyɛ ni: Momfa asase yi so nneɛma pa no bi ngu mo nkotoku mu mfa nkɔma ɔbarima no:+ balsam aduhuam kakra,+ ɛwo kakra,+ labdanum aduhuam ne akyenkyennuru,+ nkate ne ɔsonkoran.+ 12 Na momfa sika no bi nka ho nkɔ; na momfa sika a wɔde hyehyɛɛ mo nkotoku mu no nka ho,+ ebia ɛfaa wɔn ani so.+ 13 Afei momfa mo nua no na monsan nkohu ɔbarima no. 14 Na ade nyinaa so Tumfoɔ Nyankopɔn mma ɔbarima no nhu mo mmɔbɔ+ nnyaa mo nua no nka Benyamin ho mma mo. Nanso sɛ etwa sɛ mehwere me mma no a, hwee nni hɔ a metumi ayɛ!”+ 15 Enti mmarima no faa akyɛde no ne sika no mmɔho abien, na wɔde Benyamin kaa wɔn ho siim kɔɔ Egypt kogyinaa Yosef anim.+ 16 Yosef hui sɛ Benyamin ka wɔn ho ara pɛ na ɔka kyerɛɛ ɔbarima a ɔhwɛ ne fie so no sɛ: “Fa mmarima yi kɔ fie na kum nyɛmmoa yɛ aduan+ na me ne wɔn bedidi awia yi.” 17 Ɛhɔ ara na ɔbarima no de wɔn kɔɔ Yosef fie sɛnea Yosef kae no.+ 18 Bere a mmarima no hui sɛ wɔde wɔn aba Yosef fie no wɔbɔɔ hu,+ na wɔkae sɛ: “Sika a na ɛhyehyɛ yɛn nkotoku mu no nti na wɔde yɛn aba ha yi, na wɔrebɛtow ahyɛ yɛn so de yɛn ayɛ nkoa afa yɛn mfurum!”+ 19 Enti wokohuu ɔbarima a ɔhwɛ Yosef fie so no wɔ fie no kwan ano ne no kasae, 20 na wɔka kyerɛɛ no sɛ: “Yɛsrɛ wo, me wura! Yɛbaa ha bɛtɔɔ aduan.+ 21 Na yekoduu ahomegyebea+ a yɛsan yɛn nkotoku no, yehui sɛ obiara sika hyɛ ne kotoku mu, sɛnea obiara sika te pɛpɛɛpɛ. Enti yɛasan de aba.+ 22 Na yɛde sika pii aba rebɛtɔ aduan. Yennim onii ko a ɔde sika no hyehyɛɛ yɛn nkotoku mu.”+ 23 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma mo bo ntɔ mo yam, munnsuro.+ Mo Nyankopɔn ne Onyankopɔn a mo papa som no no ama mo ademude mo nkotoku mu.+ Me nsam na mo sika no dii kan bae.” Afei ɔde Simeon brɛɛ wɔn.+ 24 Ɔbarima no de wɔn baa Yosef fie na ɔmaa wɔn nsu hohoroo wɔn anan ase,+ afei ɔmaa wɔn mfurum no aduan.+ 25 Na woyiyii wɔn akyɛde+ no sɛ Yosef ba awia no a wɔde ama no, efisɛ na wɔate sɛ wobedidi wɔ hɔ.+ 26 Bere a Yosef baa fie hɔ no, wɔde nneɛma a wɔde brɛɛ no no maa no, na wobutubutuw fam wɔ n’anim.+ 27 Afei obisaa sɛnea wɔn ho te, na ɔkae sɛ:+ “Mo papa akwakoraa a mokaa ne ho asɛm no ho te dɛn? Ɔda so te ase?”+ 28 Wobuae sɛ: “Yɛn papa, w’akoa ho ye. Ɔda so te ase.” Afei wɔbɔɔ wɔn mu ase kotow no.+ 29 Bere a ɔmaa n’ani so huu ne nua Benyamin, ne maame ba no,+ ɔkae sɛ: “Mo nua kumaa a mokaa ne ho asɛm kyerɛɛ me no ni?”+ Na ɔtoaa so sɛ: “Me ba, Onyankopɔn nyi n’adɔe adi nkyerɛ wo.”+ 30 Afei na Yosef ho pere no, efisɛ na ne nua no ama ɔyɛ ne ho hwee a ɛnyɛ yiye,+ enti na ɔrepɛ baabi akosu, na ɔkɔɔ pia mu kosui.+ 31 Owiei no, ɔhohoroo n’anim puei, na ɔhyɛɛ ne ho so kae sɛ:+ “Montow pon no.”+ 32 Na wɔde ne de sii n’anim de ne nuanom de sisii wɔn anim na wɔde Egyptfo a wɔne no redidi no de sisii wɔn anim; na Egyptfo no ne Hebrifo no anto nsa annidi, efisɛ ɛyɛ Egyptfo akyide.+ 33 Wɔtenatenaa n’anim nnidiso nnidiso fi ɔpanyin+ so kosi akumaa so; na obiara hwɛɛ ne yɔnko anim a wonhu nea wɔnka. 34 Afei ɔma woyii n’anim aduan no bi de maa wɔn, na ɔmaa Benyamin de no dɔɔso sen wɔn a wɔaka no de mmɔho anum.+ Na wɔne no didi nomee kosii sɛ wɔmee.+